(England) 15 Jan 2021. Waxaa la shaaciyey tabaraha ku guuleystay abaal-marinta macalinka bishii December ugu fiicnaa ee horyaalka Premier League, waxaana ku tartamayay magacyada ilaa iyo afar macalin oo wacdaro ka dhigay horyaalka bishii la soo dhaafay.
Maamulka horyaalka Premier League ayaa si Rasmi ah u shaaciyay magaca tababarihii ku guulaystay abaal-marinta macalinkii ugu fiicnaa bishii lasoo dhaafay ee December.
Waxaa layaab noqotay kaddib markii tababaraha Aston Villa ee Dean Smith uu ku guuleystay abaal-marinta macalinkii ugu fiicnaa bishii lasoo dhaafay ee December.
Tababaraha kooxda Aston Villa ee Dean Smith ayaa wuxuu abaal-marintan si layaab leh ugu garaacay macalinka naadiga Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær, in kasta oo natiijooyinkan heerka sare ah uu ka gaaray kulamadii ay ka ciyaareen horyaalka bishii December.
Liiskan waxaa ku soo baxay 4 tababare oo uu hogaaminayo tababaraha reer Talyaani iyo kooxda Everton ee Carlo Ancelotti, kan Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær, macalinka Burnley ee Sean Dyche iyo Dean Smith oo leyliya Aston Villa.